Qurbajoogta Iyo Qada sharaftii City Crown - Cakaara News
Qurbajoogta Iyo Qada sharaftii City Crown
Jigjig a(CN) Isniin, 24ka August 2015, Xafiiska qurba joogta DDSI ayaa xaflad qado sharaf ah oo si heer sare ah loo soo agaasimay uqabtay qaarka ka mid ah qurba joogta u dhalatay deegaanka ee ka qaybgashay kulan waynihii xuska qurba joogta dalkeena Itoobiya ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay Addis Ababa.
Xafladan qado sharafta ah oo ka dhacday hutelka wayn ee City Crown ayaa waxaa kala qaybgalay wasiirka qurba joogta DDSI mudane Cabdibari Macalin Maxamed,Wasiirka Maalingalinta DDSI mudane Cabdinaasir Maxamed, Wasiirka Shaqada iyo Arimaha Bulshada, mudane Axmed Maxamed koore iyo dhamaan qurba joogtii lagu casuumay xaflada qado sharafta ah. Waxaa ugu horayntii furay xafladan wasiirka qurba joogta mudane Cabdibari Macalin oo si qoto dheer uga hadlay xurmada iyo sharafta ay xukuumada u hayso qurba joogta ku nool qaaradaha aduunka ee u dhalatay deegaanka taasi oo uu sheegay in qurba joogta deegaanku ka qaybqaataan hirgalinta qorshayaasha horumarka. Waxaa kale oo uu sheegay wasiirku in ay qurba joogtu ka hirgalisay deegaanka mashaariico badan kuwaasi oo shaqo abuur u sameeyay muwaadiniin tiro badan. Wuxuuna ku booriyay in ay sii xoojiyaan dadaalkooda ku aadan ka qaybqaadashada iyo hirgalinta horumarka xawliga ah ee ka hirgalay deegaanka.
Dhankooda qurba joogtii ka soo qaybgashay xafladan qado sharafta ah oo ka hadashay xafladan ayaa si aad ah ugu mahad celisay xafiiska qurba joogta oo tan iyo intii la yag-leelay wax wayn kabadalay xidhiidhka qurba joogta iyo xukuumada una sahlay qurba joogta dhinaca maalgashiga deegaankooda. Waxayna qurba joogtani hoosta ka xariiqeen in ay guud ahaanba xukuumada aad ugu mahad naqayaan sida loogu soo dhaweeyay deegaanka iyo dalkaba waxayna sheegeen in ay si balaadhan uga faa’iidaysanayaan fursadaha maalgashi ee deegaanku hodanka ku yahay.